Midkoodna iPhone X, ama Galaxy S9 iyo sidoo kale Galaxy Note 9. Dareemayaasha sawirka faraha ka hooseeya shaashadda ayaa diidan | Wararka IPhone
Midkoodna iPhone X, ama Galaxy S9 iyo sidoo kale Galaxy Note 9. Dareemayaasha faraha ee shaashadda ka hooseeya ayaa iska caabiya
Ming-Chi Kuo, oo ah falanqeeyaha ugu weyn ee KGI Securities, ayaa ka digaya in qaabka cusub ee shirkadda South Korea ay soo bandhigi doonto bisha Ogosto ee soo socota (sida la filayo bishan) dareeraha faraha lama dhejin doono shaashadda hoosteeda.
Markii ay bilaabeen xanta ku saabsan soo saarista iPhone X cusub, waxaa jiray qaar ka mid ah oo sheegay suurtagalnimada in aaladda Apple ay is dhex geli karto dareeraha Aqoonsiga Aqoonsiga ee lagu dhisay qaybta hoose ee shaashadda, ka dib waxay bilaabatay in la tuuro oo aan waligeed iman. Iyadoo dhowaan la soo bandhigay Samsung Galaxy S9 iyo S9 Plus, warar xan ah ayaa si dhib yar u dhigay dareemaha hoose ee shaashadda oo hadda leh Galaxy Note 9 wax la mid ah ayaa dhacaya, suurtagal ma noqon doonto.
Warbixintan cusub waxay ka digeysaa in shirkadu aysan laheyn qaaciido lagama maarmaan ah oo ay ku hirgeliso dareemahan hoose shaashadda iyo sidaa darteed ma noqon doonto kii ugu horreeyay ee aaladaha waaweyn ee fuliya. Sida iska cad, Kuo, kuma saxsana waxkastoo uu dhaho laakiin waxay umuuqataa sida ku cad wararka xanta ah ee uguhoreeyay ee shabakada laga baahiyay inuu gabi ahaanba ku saxan yahay warbixintan.
Sida laga soo xigtay warbixinta iyo wararka xigay ee uu faafiyey falanqeeyaha KGI, "dhibaatooyinka farsamada" ayaa noqon doona sababta ugu weyn ee tan cusub ee Galaxy Note 9 uusan si toos ah shaashadda ugu darin dareeraha faraha. Shaashadda shaashadda ayaa qayb ahaan lagu eedeynayaa dhibaatooyinkan nidaamka hirgelinta waana taas qatar galinaya terminal sida Galaxy Note, maahan ikhtiyaar aad ufiican aan dhahno. Sababtaas awgeed, shirkaddu waxay meel saari doontaa dareemahan waxaanan ku arki karnaa mustaqbal fog.
Qalabka soo socda ee Apple ayaa bilaabmaya bisha Sebtember hubaashii ma fulinayaan sidoo kale, waana inay tahay in Face ID-ku si fiican u shaqeeyo si uu ikhtiraac ula sameeyo dareemayaasha taabashada ah ee 'ID ID' shaashadda hoosteeda, sidoo kale waxaa la sheegay inay yareynayaan cabbirka qormada sidaas darteed waxaa hubaal ah inay sii wadayaan adeegsiga tikniyoolajiyaddan a waqti dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Midkoodna iPhone X, ama Galaxy S9 iyo sidoo kale Galaxy Note 9. Dareemayaasha faraha ee shaashadda ka hooseeya ayaa iska caabiya
Furitaanku wuxuu sare u qaadayaa Sheekooyinkaaga Instagram heer heer sare ah